Mahad Salaad oo sharaxay qaabkii looga celiyay Kulankii Golaha Shacabka - Awdinle Online
Mahad Salaad oo sharaxay qaabkii looga celiyay Kulankii Golaha Shacabka
Xildhibaanka ayaa Caawa sharaxaad dheeri ah ka bixiyay sida looga celiyay baraha koontorool ee laga galo Madaxtooyada, iyaga oo doonayay inay ka qeyb galaan kulankii Golaha Shacabka.
Hoos Ka Akhriso Qormada Xildhibaan Mahad Salaad.
SAAKAY MAXAA DHACAY. MAXAASE NALA GUDBOON?
Isgoyska Dabka iyo Ceelgaabta oo ah irdaha Madaxtooyada laga galo marka loo socdo xarunta Golaha Shacabka ayaa saakay nagula celiyay aniga iyo Xildhibaano kale oo u socday shirkii Golaha Shacabka. Ciidamada na celiyay waxay ahaayeen kuwa Booliska waxaana hoggaaminayay saraakiil qaraabada ah oo sida la ii sheegay xalay la soo xulay, malaha Farmaajo wuxuu islahaa hadii wax dhacaan kuwa dhimanaya iyo kuwa laga dhimanayo isku iyaga ha noqdeen. Ciidamada kale Fahad iyo Farmaajo ku talagaleena waxaa la ii sheegay in ay dhoobnaayeen irida Madaxtooyada ilaa Villa Hargeysa oo ah Xarunta Golaha Shacabka!
Nasiib wanaag ciidamadii nala socday iyo kuwii meesha aan ugu nimid dad qaraabo ah oo isgaranaya ayay ahaayeen. Saraakiishii ciidamadaas watay waa noo yimaadeen, mana rabo in aan ka faalloodo wixii ina dhex maray lkn waxaan rabaa inaan u mahadceliyo, kuna amaano shaqada ay dalka u hayaan iyo fahamkooda ku aadan marxalada siyaasadeed iyo mida amni ee dalku ku suganyahay.
Previous articleRa’isul-wasaarihii hore ee dalka Masar oo geeriyooday
Next articleJanan oo cadeeyay wixii ay isku khilaafeen Madaxweynaha Jubbaland